Xaalad nolol xumo oo laga soo tabiyay deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Kwale – The Voice of Northeastern Kenya
Xaalad nolol xumo oo laga soo tabiyay deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Kwale
Dadka ku dhaqan deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Kwale ee gobolka xeebta dalka ayaa wajahaya xaalad nololeed oo walaac xoogan laga muujiyay.
In ka badan 300,000 oo qof oo ka mid ah shacabka ku sugan magaalooyin kala duwan oo hoos taga Kwale ayaa lagu soo waramaya in ay la il daranyihiin gaajo baahsan oo saameyn ba’an ku yeelatay.
Gudoomiyaha maamul goboleedka Kwale Kutso olaka oo arrintaan xaqiijiyay ayaa sheegay in tirada dadka ay gaajada saameysay ay aad u sii badan karto muddo kooban gudeheeda.
Mr Olaka ayaa sharaxaad ka bixiyay deegaannada ay ka taaganyihiin xaaladaha nololeed ee ugu xun, waxaana uu ku baaqay in deeq raashin oo deg deg ah lala gaaro dadkaasi isagoo dhanka kalena ka mahad celiyay mucaawino ay horay dowladda dhexe u geysay gobolkaasi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ka dhawaajiyay in xiligaas ay dowladda dagaal fiican u sameysay garab istaagidda dadka ay macluusha saameysay hase ahaatee raashinkaasi uusan sidii loo baahnaa u deeqin shacabka baahan maadaama roobabkii la filayay aysan sanadkaan si fiican uga di’in aagaasi.
Wasaaradda dowlad wadaajinta iyo qorsheynta qaranka ayaa in dhawaaleba dadaal ugu jirtay sidii ay raashin ku filan u gaarsiin lahayd qoysaska tabaaleysan ee ku dhaqan deegaanno badan oo ka tirsan qaar ka mid ah maamul goboleedyada uu ka koobanyahay dalka.
← Kooxo hubeysan oo dhaawac u geystay askari ka tirsan booliska
Hoggaamiyaasha kooxda MRC oo soo dhaweeyay go’aan kasoo baxay maxkamadda →